Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Uganda War Deg Deg Ah » Ugandha waxay soosaartay amarka dalabka fiisada internetka
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Waajib ah • Technology • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Uganda War Deg Deg Ah • Wararka kala duwan
Major General Apollo Kasita-Gowa oo ah agaasimaha agaasinka jinsiyada iyo xakamaynta soo galootiga
Codsadayaasha khadka tooska ah waxay helayaan ogeysiis la ansixiyay oo ay tahay inay daabacaan oo ay ula safraan rukhsad ahaan safarka.
Wasaaradda arrimaha gudaha ee Uganda ayaa amar ku bixisay in dhammaan dalabyada fiisaha ay tahay in lagu sameeyo laguna bixiyo internetka.
Amarka waxaa soo saaray oo uu saxiixay Major General Apollo Kasita-Gowa oo ah Agaasimaha Hogaanka Jinsiyadaha iyo Xakamaynta Socdaalka.
Kaliya socdaalayaasha leh fiisooyinka la ansixiyay ee codsanaya khadka tooska ah ayaa la siin doonaa gelitaanka waddanka.
Kadib amarkii afartan iyo labo maalmood ee xirida ee uu soo saaray Madaxweynaha Dalka Mudane Yoweri K Museveni khudbadiisii ​​u dambeysay ee uu u jeedinayay shacabka ee ku saabsanaa kororka bishii la soo dhaafay ee COVID-19, Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Uganda ayaa tan iyo markii ay amartay in dhammaan dalabyada fiisaha la sameeyo lana bixiyo. loogu talagalay khadka tooska ah ee internetka oo aan la imaanin.
Amarkan waxaa soo saaray oo uu saxeexay Major General Apollo Kasita-Gowa oo ah Agaasimaha Agaasinka Jinsiyadda iyo Xakamaynta Socdaalka (DCIC) 23-kii Juun, 2021.
Qeybtani waxay aqrinaysaa “… hirgalintooda waajibaadka ah xakameynta, nidaaminta iyo fududeynta dhaqdhaqaaqa gudaha iyo dibedda ee xiritaanka 42-ka maalmood waxay ku amartay in codsiyada fiisaha lagu sameeyo internetka https://visas.immigration.go.ug/ ka soo horjeedka fiisaha imaatinka. ”
Agaasinka ayaa sii dardaarmay:
Kaliya socdaalayaasha leh fiisooyinka la ansixiyay ee codsanaya khadka tooska ah ayaa la siin doonaa gelitaanka waddanka
Hawlwadeennada diyaaradaha ayaa qaadaya kaliya rakaabka leh fiisooyin horay loo ansixiyay oo loogu talagalay dalalka fiisaha u nugul. Haddii loo hoggaansami waayo, ganaaxa lagama maarmaanka ah ayaa la adeegsan doonaa
Dhamaan rakaabka safarka ah waa la fasaxay si ay usii wadaan
Dhamaan socotada soo galaya iyo kuwa ka baxaya dalka waxaa looga baahan yahay inay haystaan ​​dukumiinti safar iyo cadeymo kale oo ku taageeraya safarkooda
Dhammaan codsiyada kale ee internetka iyo cusboonaysiinta xarumaha socdaalka ee ah Gelitaanka, Ogolaanshaha Shaqada, Baasaska Gaarka ah, Baasaboorada Ku Tiirsanaanta iyo Shahaadada Deganaanshaha weli waa lagu dalban karaa khadka tooska ah
Ogeysiis dheeri ah ayay ETN ka aragtay Adeegga Macluumaadka Hawada ee Hay'adda Duulista Rayidka oo xaqiijineysa in ka sokow shirkadaha diyaaradaha ee loo oggol yahay inay ku safraan oo keliya socotada leh fiisooyinka la oggolaaday iyo kuwa la fasaxay ee deggenayaasha leh deganaansho ansax ah (oggolaansho gelitaan / shaqo, baasaboor ama caddeyn deganaansho noqo
la oggol yahay Ogeysiiska waxaa laga reebay muwaadiniinta dalalka laga reebay ee ku qoran bogga socdaalka. Amarkan wuxuu dhaqan galayaa laga bilaabo 3da Luulyo ilaa 31,2021ka Julaay XNUMX.
Si kastaba ha noqotee dalabka fiisaha ee internetka ma ahayn mid aan lahayn cilladaha uu leeyahay. Qaar ka mid ah codsadayaasha ma helin xaqiijin qaar ka mid ah hawlwadeenada dalxiiskuna waxay ka cawdeen in macaamiishooda jahawareerka ahi ay horay u sii ahaayeen transit waqtiga amarka.
Tani waxay ku kalliftay Guddiga Ururka Hawlwadeennada Dalxiis ee Uganda (AUTO) oo uu hoggaaminayo Civy Tumusiime inay la xiriiraan DCIC oo xalliyay arrinta iyagoo ka faa'iideystay khad u qoondeeyey sarkaalka socdaalka si loo nadiifiyo dalxiisayaasha go'doonsan.